HUAWEI MatePad Pro, Rethink Creativity | HUAWEI Myanmar
HUAWEI FullView Display | Kirin 990 Flagship Chip | HUAWEI Share1
အလုပ်လုပ်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ စိတ်ကူးအသစ်တွေကို ရှာဖွေဖန်တီးစဉ်းစားနေတာပဲဖြစ်ဖြစ် 90%2 မျက်နှာပြင်ကျယ်အချိုး၊ 4.9 mm သာရှိတဲ့ သေးသွယ်သောဘောင်နဲ့ 10.8 လက်မအကျယ် မြင်ကွင်းပြည့် HUAWEI FullView Display4 က အကောင်းမွန်ဆုံးသော ပုံရိပ်အတွေ့အကြုံတို့ကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ရုံအဆင့်ရှိ DCI-P3 အရောင် gamut နဲ့ 540 nit5 brightness တို့က အမှောင်ထဲမှာဖြစ်စေ၊ အလင်းနည်းပါးသောနေရာမှာဖြစ်စေ ကြည်လင်တောက်ပသော အရောင်အရည်အသွေးကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် TÜV Rheinland6 အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရထားသော screen ကြောင့် သင့်မျက်လုံးကျန်းမာရေးကိုကာကွယ်နိုင်ရန် အပြာရောင်အလင်းတန်းများကို လျော့ကျစေပါတယ်။3
HUAWEI MatePad Pro ကို လှပသောသဘာဝတရားကြီး၏ အရောင်များဖြင့် (၄) မျိုးဖန်တီးထားပါတယ်။ သင့်စတိုင်ကို ပိုမိုလှပတောက်ပြောင်စေမယ့် Sleek Glass Fiber7 အသုံးပြုထားသော Midnight Grey နှင့် Pearl White၊ ကျော့ရှင်းလှပသော vegan leather8 အသုံးပြုထားတဲ့ Forest Green နှင့် သင့်ရဲ့ သစ်လွင်သောနေရက်တိုင်းအတွက် Orange အရောင်တို့ကို ဖန်တီးထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။
ကြာရှည်ခံပြီး သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူစေရန် ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားတဲ့ 460 g9 သာရှိတဲ့ ကိုယ်ထည်က လွယ်အိတ်ထဲမှာ စာရွက်တစ်ရွက်ကိုထည့်ထားသလိုပဲ ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ HUAWEI MatePad Pro မှာ antenna ကိုမြှပ်ထားပြီး သေသပ်ကျစ်လှစ်လှပတဲ့ micro-cure frame က လက်ထဲမှာကိုင်တွယ်ရတာအဆင်ပြေစေပြီး သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူတာကြောင့် ဘယ်သွားသွားသင့်နဲ့အတူ အလွယ်တကူသယ်ဆောင်သွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Kirin 990 စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့် Chipset ကြောင့် HUAWEI MatePad Pro သည် စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် စွမ်းအင်မြှင့်တင်မှုတို့ကိုများစွာတိုးတက်စေသည်။ Huawei ၏ ကိုယ်ပိုင်တီထွင်ထားသော NPU က AI စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်နေစဉ်တွင10်ကွန်ပျူတာစွမ်းအားကိုခွဲဝေချထားပေးသောကြောင့် ပိုမိုထိထိရောက်ရောက် စွမ်းဆောင်နိုင်ပါသည်။10 16-Core Mali-G76 ကို GPU-Turbo နည်းပညာဖြင့် ပံ့ပိုးပေးထားသောကြောင့် ရုပ်ရှင့်နှင့် ဂိမ်းများအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သောပုံရိပ်များကို ပေးစွမ်းပါသည်။
HUAWEI MatePad Pro နဲ့ သင့်ရဲ့ စမတ်ဖုန်းကို ချိတ်ဆက်ပြီးသည့်နောက်မှာ11 super device တစ်ခုအဖြစ် ပေါင်းစပ်သွားပါတယ်။ သင့်စမတ်ဖုန်းမျက်နှာပြင်ကို သင့်တက်ဘလက်ပေါ်တွင် ဖော်ပြပေးပြီး မျက်နှာပြင်ကျယ်ကျယ်တွင် အသုံးပြုနိုင်ပြီး ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများ၊ message ပို့ခြင်း12 နဲ့ သင့်ဖုန်းပေါ်မှ ဓာတ်ပုံများကိုလည်း တက်ဘလက်ပေါ်တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Keyboard တစ်ခုတည်းကိုသာအသုံးပြုပြီး သင့်သူငယ်ချင်းနဲ့ စကားပြောနေချိန်မှာပင် Device နှစ်ခုမှ files များကို အရွှေ့အပြောင်းပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။13 ထိုသို့ cross-device collaboration လုပ်နိုင်တာကြောင့် အလုပ်လုပ်ရသည်ကို ပိုမိုလွယ်ကူမြန်ဆန်စေပါသည်။
အသစ်ထွက်ရှိထားတဲ့ စတိုင်ကျလှပတဲ့ ဆဌဂံပုံစံနဲ့ HUAWEI M-pencil14 က စာရွက်တစ်ရွက်ပေါ်တွင် ခဲတံဖြင့်စာရေးသကဲ့သို့ သဘာဝကျကျရေးသားနိုင်ပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်သော features များနှင့် အမျိုးမျိုးသော စုတ်ချက်များကိုပါဝင်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
HUAWEI M-pencil ၏ ခဲတံထိပ်တွင်ရွေးချယ်ထားသောပစ္စည်းများကို အသုံးပြုထားသောကြောင့် အရေးအသားကိုချောမွေ့စေပြီး latency မရှိသလောက်မြန်ဆန်ပြီး မျက်နှာပြင်တွင်ပေါ်လာစေပါတယ်။ 4096 Levels of Pressure Sensitivity15 တပ်ဆင်ထားတာကြောင့် သင်ဖန်တီးထားတဲ့အရာတွေပြီး သင့်ရဲ့အရေးအသား သို့မဟုတ် ပုံဆွဲထားသည်များကို မလွတ်တမ်းဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်။
အလိုအလျောက်ချိတ်ဆက်၊ သံလိုက်ဖြင့်ပူးတွဲနိုင်ပြီး ကြိုးမဲ့စနစ်ဖြင့်အားသွင်းလိုက်ပါ။
HUAWEI M-pencil ကို တက်ဘလက်ရဲ့ဘေးမှာညင်သာစွာပူးတွဲထားပြီး တစ်နာရီကြိုးမဲ့အားသွင်းရုံဖြင့် အားအပြည့်ပြည့်နိုင်ပါတယ်။ သင်ဟာ အလုပ်များပြီး ဖန်တီးမှုတွေရှိမယ့်နေ့တစ်နေ့ကို အသင့်ဖြစ်နေပါပြီ။16 မှတ်စုအမြန်မှတ်နိုင်ဖို့အတွက် စောင့်နေစရာမလိုတော့ပါ။ စက္ကန့် ၃၀ အားသွင်းရုံနဲ့ ၁၀ မိနစ်17 အသုံးပြုနိုင်တာကြောင့် အချက်အလက်တွေလွတ်သွားတာမျိုး မရှိတော့ပါဘူး။
စိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေပေါ်ထွက်လာတဲ့အခါမှာ HUAWEI MatePad Pro နဲ့ ချက်ခြင်းပုံဖော်လိုက်ပါ။ ပိတ်နေတဲ့ screen ကို Tap လုပ်လိုက်ပါ။18 HUAWEI M-pencil နဲ့ဖွင့်နိုင်ပြီး Notepad ကို တိုက်ရိုက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့စိတ်ကူးသစ်များကို မှတ်စုရေးခြင်း၊ ပုံကြမ်းဆွဲခြင်းအစရှိသည်တို့ကို အမျိုးမျိုးသောအရောင်များ၊ စုတ်တံများဖြင့်ပုံဖော်နိုင်ပြီး အနာဂတ်တွင်လည်း ပြန်လည်ရှာဖွေအသုံးပြု၊ ပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်။19
သက်တောင့်သက်သာရှိပြီး ထိရောက်သော စာရိုက်ခြင်း
Smart magnetic keyboard20 ကိုတပ်ဆင်လိုက်ပါ။ 1.3 mm အကွာအဝေးသာရှိတဲ့ keystroke က တကယ့် laptop keyboard မှာရိုက်နေရသလို ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ သင့်တော်တဲ့အလင်းရောင်ရရှိနိုင်ဖို့ dual stand angles နဲ့ အရွှေ့အပြောင်း ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ညာဘက်တွင်ရှိသော Shift button က ကို သင့်ဖုန်းက NFC sensor ကိုဖွင့်ပြီး အလွယ်တကူ multi-screen collaboration ကိုလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။1 ဒါ့အပြင် ခေါက်သိမ်းထားသည့်အချိန်တွင် cover တစ်ခုအပြင်သာမက ဖွင့်လိုက်ရုံဖြင့် တက်ဘလက်ပါနိုးလာသောကြောင့် သင်အလိုအလျောက်စတင်လုပ်ကိုင်နိုင်ပါတယ်။
သင့် laptop ကိုထားခဲ့လိုက်ပါ။
PC Mode ကို တစ်ချက်တည်းနဲ့ပြောင်းလိုက်ပါ။21 ပြောင်းလဲရလွယ်ကူသော desktop က zoom ဆွဲခြင်း၊ အပြောင်းအရွှေ့လုပ်ခြင်းအစရှိတဲ့ သင်လုပ်လေ့ရှိသောအရာများကို အသုံးပြုနိုင်ပြီး အချို့သော အချက်အလက်များကို PC မှာကဲ့သို့ပင် တိုက်ရိုက် destop22 မှာ သိမ်းဆည်းနိုင်ပါတယ်။ ခရီးသွားရင်းလည်း စမတ်ကျကျအလုပ်လုပ်နိုင်ပြီပေါ့။
သင့်အတွေးသစ်များကို အာရုံစူးစိုက်ထားပြီး ကျန်တဲ့အရာတွေကို HUAWEI MatePad Pro က ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါစေ။ WPS features23 ကြောင့် အလုပ်လုပ်ကိုင်ရတာ ပိုမိုအဆင်ပြေလွယ်ကူပြီး မြန်ဆန်ထိရောက်စေပါတယ်။ Voice Note-taking နဲ့မှတ်စုတွေကို smart ink mode ဖြင့် အရေးကြီးတဲ့လိုအပ်တဲ့နေရာများကို ပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ထက်မြက်သောလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ယောက်နဲ့ အလုပ်တူတူလုပ်ရသလိုဖြစ်သောကြောင့် အလုပ်များကို လျင်လျင်မြန်မြန်နဲ့ ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်ပြီး အားလပ်ချိန်များကို ခံစားနိုင်မှာပါ။
EMUI1025 ရဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် Multi-Window24 feature က အလုပ်လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဂိမ်းကစားတာဖြစ်ဖြစ် ဘက်စုံလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ Presentation အတွက်ပြင်ဆင်နေရင်း အရှေ့မှမှတ်စုများကိုပြန်သွားကြည့်တာဖြစ်ဖြစ်၊ shortcut menu ကိုပြရန် dock ကိုနှိပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သင်လုပ်လက်စအလုပ်ကို အနှောက်အယှက်မဖြစ်စေပဲ floating window ပေါ်မှစာပြန်ခြင်းအစရှိတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်များကို split-screen နဲ့ ပိုမိုအဆင်ပြေစွာတွေ့ကြုံခံစားနိုင်ပါတယ်။
HUAWEI APP Multiplier26 က app တစ်ခုထဲကို အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ဈေးဝယ်ထွက်ခြင်း ရွေးချယ်စရာအမျိုးမျိုးကို နှိုင်းယှဉ်နိုင်ရန် ဘေးချင်းယှဉ်ပြသနိုင်ခြင်း၊ သတင်းဖတ်ရှုနေရင်းနဲ့ သက်ဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာများနဲ့ ဓာတ်ပုံများကြည့်ခြင်းတို့ကို တပြိုင်တည်းလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
HUAWEI MatePad Pro က သေသပ်ကျစ်လှစ်လှပသကဲ့သို့ quad-channel နဲ့ quad-speaker sound system တို့နဲ့ ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ Histen 6.0 3D stereo က သင်ရင်ထဲအထိ ထိမိစေသော အသံစနစ်ကို ထုတ်လွှင့်ပေးပါတယ်။ Harman Kardon® Audio ကိုနားဆင်ပြီး အသေးစိတ်ကျတဲ့ acoustic ကို နေရာအနံှ့မှလာသော အသံလှိုင်းများဖြင့် လွှမ်းမိုးနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် microphones ၅ လုံးက 360° noise cancellation လုပ်ဆောင်ပြီး သင့်ရဲ့အသံကို ကြည်လင်ပြတ်သားစွာ ကြားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ပထမဆုံး HUAWEI tablet အနေဖြင့် 15 W wireless နဲ့ 7.5 W Reverse Wireless Charging26 ကိုထောက်ပံ့ပေးပြီး အခြားသော gadgets များကိုပါ သွားလာနေရင်း တစ်ဆက်တည်းအားသွင်းနိုင်ပါတယ်။27 20 W fast charging28 တပ်ဆင်ထားပြီး မိနစ် ၃၀29 အားသွင်းရုံနဲ့ ၃ နာရီကြာအောင် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် သင့်ရဲ့မမျှော်လင့်သောစိန်ခေါ်မှုများကို ကြီးမားသောဘက်ထရီက ၁၂နာရီ30 အထိ ထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။
ဤ feature သည် EMUI10 နှင့် အထက်ရှိသော HUAWEI ဖုန်းများနှင့် Magic UI 3.0 နှင့်အထက်ရှိသော Honor ဖုန်းများတွင်သာ အထောက်အပံ့ပေးသည်။ HUAWEI Mate 30 Series (update ထားသော 10.0.0.191 သို့မဟုတ် အထက်) သည် ထို feature ကို အထောက်အပံ့ပေးသော ပထမအသုတ် စမတ်ဖုန်းများဖြစ်သည်။ ထို feature ကို အထောက်အပံ့ပေးရန် အခြားသော model များကိုလည်း တဖြည်းဖြည်း upgrade လုပ်မည်ဖြစ်သည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို official website မှာ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
Huawei labs test ၏အဖြေကို အခြေခံထားခြင်းဖြစ်သည်။ Screen-to-ratio ကို active area (AA) နှင့် touch panel (TP) တို့အချိုးဖြင့်တွက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ် screen-to-body ratio သည် ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။
Huawei lab test ၏အဖြေကို အခြေခံထားခြင်းဖြစ်သည်။ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ပေါ်မူတည်ပြီး အမှန်တကယ် အရွယ်အစားသည် ကွဲပြားနိုင်သည်။
FullView display သည် ကျဉ်းမြောင်းသော bazel နဲ့ ကြီးမားသော screen-to-body ratio ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပြီး industry တွင်အသုံးပြုနေကျ concept တစ်ခုဖြစ်သည်။ HUAWEI MatePad Pro သည် ထောင့်ဝိုင်းနေသောဒီဇိုင်းကို အသုံးပြုထားပြီး standard rectangular display ဖြင့်တိုင်းတာလျှင်ထောင့်ဖြတ်အချိုးသည် ၁၀.၈ လက်မရှိသည်။ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ပေါ်မူတည်ပြီး အမှန်တကယ်အရွယ်အစားသည် ကွဲပြားနိုင်သည်။
540 nit သည် ပုံမှန်တန်ဖိုးဖြစ်သည်။
TUV Rheinland certification စမ်းသပ်မှုအခြေအနေသည် eye comfort mode ကိုဖွင့်ထားပြီး color temperature adjustment မပါဘဲ Rheinland low blue light test ကို တက်ဘလက်သည် ဖြတ်သန်းရခြင်းဖြစ်သည်။
Glass Fiber သည် အကောင်းဆုံးသော inorganic non-metallic တစ်ခုဖြစ်သည်။
Vegan leather သည် PU leather ကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။
460 g သည် ထုတ်ကုန်၏ glass fiber အနောက်မှ cover ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ Vegan leather အနောက် cover ဆိုလျှင် ထုတ်ကုန်၏အလေးချိန်သည် 492 g ရှိသည်။ ဤ data သည် Huawei lab test ၏ ရလဒ်ဖြစ်ပြီး keyboard ၏အလေးချိန်မပါဝင်ပါ။ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ပေါ်မူတည်ပြီး အမှန်တကယ်အရွယ်အစားသည် ကွဲပြားနိုင်သည်။
ဤရလဒ်သည် Huawei lab test ၏ Kirin 980 ဖြင့် နှိုင်းယှဉ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
ချိန်ဆက်နိုင်ရန် နည်းလမ်း(၃)ခုရှိသည်။ 1. Bluetooth နှင့် Wi-Fi ကို Tablet နှင့် smartphone နှစ်မျိုးလုံးတွင် ဖွင့်ထားပါ။ Tablet တွင် Multi-screen Collaboration ကိုဖွင့်ထားပါ။ ဖုန်းကို တက်ဘလက်နှင့် 20 cm အတွင်းတွင်ထားပြီး လေးထောင့်ကွက်လေးပြလာပြီး Phone to Tablet ချိတ်ဆက်ရန် OK ကိုနှိပ်ပါ။ 2. ညာလက် Shift button တွင်ရှိသော ကိုနှိပ်ပြီး keyboard ဖြင့်ချိတ်ဆက်ပါ။ 3. Multi-Screen Collaboration feature တွင် Scan connection ကိုနှိပ်ပြီး ဖုန်းမှ HUAWEI browser ကိုအသုံးပြုပြီး ချိတ်ဆက်ရန် QR code ကို scan ဖတ်ပါ။
ဤ feature သည်စမတ်ဖုန်း၏ချိတ်ဆက်နိုင်မှုစွမ်းရည်ကိုထောက်ပံ့ပေးပြီး တက်ဘလသီးသန့်တွင် မရရှိနိုင်ပါ။
ဤ feature သည် တချို့သော Apps များတွင်သာ ထောက်ပံ့ပေးပါသည်။
HUAWEI M-pencil ကို သီးခြားဝယ်ယူရန်လိုအပ်ပါသည်။
ဤ feature သည် တချို့ Apps များတွင်သာ အသုံးပြုနိုင်သည်။ ရေးသားနည်းနှင့် အသုံးပြုသော apps များကိုမူတည်ပြီး အမှန်တကယ်အသုံးပြုမှုသည် ကွဲပြားနိုင်သည်။
ဤ data သည် HUAWEI lab ရလဒ်နှင့် reference အတွက်သာရည်ရွယ်သည်။ အမှန်တကယ် အသုံးပြုပုံပေါ်မူတည်ပြီး ကွဲပြားနိုင်သည်။ တစ်နေ့တာသည် အလုပ်လုပ်ချိန် ၁၀နာရီကို ရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်သည်။
ဤ data သည် HUAWEI lab ရလဒ်နှင့် reference အတွက်သာရည်ရွယ်သည်။ အမှန်တကယ် အသုံးပြုပုံပေါ်မူတည်ပြီး ကွဲပြားနိုင်သည်။
Screen-off standby mode ကို ရည်ညွှန်းပါသည်။
ဤ feautre သည် HUAWEI အတွက် Nebo မှ အထောက်အပံ့ပေးသည်။
ဤ keyboard သည် HUAWEI MatePad Pro နှင့်တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ပြီး သီးသန့်ဝယ်ယူရန်လိုအပ်သည်။
တက်ဘလက်၏ Home interface တွင် drop-down menu ပေါ်ရှိ PC mode ကိုထိပါ။
ဤ feature သည် အချို့သော Apps များတွင်သာ အသုံးပြုနိုင်သည်။ အသုံးပြုပုံပေါ်မူတည်ပြီး ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။
အထက်ပါ features များသည် HUAWEI MatePad Pro တွင် Internet ဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားမှသာလျှင် အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး အချို့သော Apps များတွင် နောက်ဆုံး version ကို update လုပ်ပေးရန်လိုအပ်သည်။
ထည့်သွင်းထားသော version သည် EMUI 10.0.1 ဖြစ်ပြီး နောင်လာမည့် updates များကိုပါ အထောက်အပံ့ပေးသည်။ ဤ feature သည် HUAWEI MatePad Pro တွင် internet ချိတ်ဆက်ထားမှသာလျှင် အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံး version ကို update လုပ်ပေးရန်လိုအပ်သည်။
ထည့်သွင်းထားသော version သည် EMUI 10.0.1 ဖြစ်ပြီး နောင်လာမည့် updates များကို အထောက်အပံ့ပေးသည်။
Wireless fast charging port သည် သီးခြားဝယ်ယူရန်လိုအပ်သည်။ Reverse Wireless Charging feautre သည် HUAWEI lab tests မှ စမ်းသပ်အောင်မြင်သော device များကိုသာ ထောက်ပံ့ပေးပါသည်။ Reverse Wireless Charging သည် default အနေဖြင့်ဖွင့်မထားသောကြောင့် အသုံးမပြုမီ settings ထဲမှ battery ကိုဝင်ပြီး ဖွင့်ပေးရန်လိုအပ်သည်။
HUAWEI lab tests မှ စမ်းသပ်အောင်မြင်သော device များတွင်သာ reverse wireless charging ကို အထောက်အပံ့ပေးပါသည်။
ပုံမှန် 20 W fast charging သည် 40 W HUAWEI SuperCharge ကိုလည်းအထောက်အပံ့ပေးပါသည်။ 40 W SuperCharge အတွက် charging cable သည် သီးခြားဝယ်ယူရန်လိုအပ်ပါသည်။
ပုံမှန်အခြေအနေတွင် data သည် HUAWEI lab ရလဒ်အပေါ်တွင် မူတည်သည်။ ထုတ်ကုန်၏ model၊ software version၊ အသုံးပြုပုံနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမူတည်ပြီး ကွဲပြားနိုင်သည်။
ပုံမှန်အခြေအနေတွင် data သည် HUAWEI lab ရလဒ်အပေါ်တွင် မူတည်သည်။ ဘက်ထရီသည် 1080p local video ကို ၁၂ နာရီကြာဖွင့်၍ အသုံးပြုနိုင်သည်။ ထုတ်ကုန်၏ model၊ software version၊ အသုံးပြုပုံနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမူတည်ပြီး ကွဲပြားနိုင်သည်။